I-China Clothing label Manufacturers, i-Quotation eyenziwe ngezifiso yezingubo - I-Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Ilebuli yezingubo
Ilebula yokuphrinta yezingubo
ilebula lokuphrinta noma ithegi kanye nelebuli eyinhloko, ilebula losayizi, ilebula lokuwasha, kungenye yezindlela zokuphrinta, izinto ezibandakanya iribhoni, itheyiphu kakotini, iribhoni, indwangu yombala, indwangu kakotini, indwangu engalukiwe, njll., imikhiqizo ivame ukusetshenziselwa izingubo, izicathulo, izigqoko, izingubo zangaphansi, be, nezinye izimpahla zansuku zonke noma izindwangu, inhloso ukuvumela amakhasimende aqonde umkhiqizo womkhiqizo, usayizi, ukwakheka kwempahla kanye nezinga lamanzi okugeza.
Amalebula wesitika se-Garment
Ilebula Self-Yesigcilikisha has izinzuzo akukho ibhulashi glue, akukho unama, akukho dip amanzi, akukho ukungcola, ugcine isikhathi kophawu nokunye nge ilebuli bendabuko. It has anhlobonhlobo izicelo, elula futhi fast. Luhlobo lwento ehlanganisiwe enephepha, ifilimu noma ezinye izinto ezikhethekile njengendwangu, ingcina ngemuva nephepha le-silicon elivikelayo njengephepha lesisekelo.
Ilebula ukunakekelwa ingubo
okuqukethwe okuyinhloko kwelebuli lendwangu yokuwasha kunemingcele ethile yezingubo, ekhombisa indwangu, ukwakheka kwempahla nokuthi zingagcinwa kanjani izingubo.Ingagezwa ngaphandle kokubuna. Luhlobo lwelebula ephothiwe. Ilukiwe emshinini welebula ephothiwe ngokulungisa umucu we-warp nokusebenzisa intambo ye-weft ukuveza amagama, imidwebo, izinhlamvu, izinombolo, izimpawu ezi-ntathu kanye nokuhlanganiswa kombala.
Ilebula losayizi wezingubo
usayizi welebula ingenye yezimboni zezingubo ezibalulekile, isuselwe kusayizi oyisisekelo womzimba womuntu, ngokusho kwezitayela ezahlukahlukene, ngenani elifanele lokuxegiswa.Uma usayizi wengubo usunqunyiwe, kuyisisekelo sengubo yokukhiqiza.
Ilebuli yebhakhodi yezingubo
ilebula lebhakhodi, njengoba igama lisho, ilebula eliphrinta noma eliphrinta ibhakhodi.Izinhlelo zokusebenza eziningi zidinga ukuthi inombolo ngayinye yekhodi ye-bar ihluke Ngokubheka izindleko nokusebenziseka kalula, amalebula webhakhodi avame ukuphrintwa ngabaphrinta bebhakhodi.
Umaki wezingubo wumkhiqizo olengiswe kuzo zonke izinhlobo zezingubo, kufaka phakathi izinto zokugqoka, izindlela zokuwasha kanye neminye imininingwane.Ngokubuka kokuthungwa, izinto eziningi ezenziwe ngamathegi wokulenga ziyiphepha, ipulasitiki nensimbi.